ဝိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၆) | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ၀ိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၅)
၀ိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၇) →
မေး ။ ကျွန်တော် လောကကြီးကို ခဏ ခေါက်ထားကြည့်တယ် ဆရာကြီး။
ဖြေ ။ လောကဆိုတာတော့ ခေါက်ရမှာပဲ။
မေး ။ကျွန်တော်အခု ရင်ထဲမှာ လွတ်တွတ် လွတ်တွတ်နဲ့ တော်တော်လေးတော့ နေလို့ကောင်းတယ်။
ဖြေ။ နေလို့ကောင်းပေမယ့် သူ့ကိုလည်း လက်ခံလို့ မဖြစ်ဘူး၊ အပျက်ရှုတဲ့လိုင်း သွားရမှာပဲ။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး ကျွန်တော် နာခံပါ့မယ်၊ ရှုပါ့မယ် ဆရာကြီး။
ဖြေ ။ မရှုခင်ကထက် စာရင်တော့ အခုဟာ ကောင်းနေတယ်လို့ ပြောလို့ရပေမယ့် ဒါ လမ်းဆုံးတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီတော့ ရှုရမှာပဲ။
မေး ။ ကောင်းပါပြီ ဆရာကြီး၊ နာခံပါ့မယ်။ ကျွန်တော် နည်းနည်း ကြည်လင် ပေါ့ပါးမှုလေးတွေ ဘာလေးတွေ ရှင်းသန့်မှုလေးတွေလည်း ခံစားရပါတယ်။
ဖြေ။ ဒါ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးပဲလေ။ ဒီထက်ဒီ တွေ့ဦးမှာလေ။ ဒါက လမ်းခုလတ်ပေါ့။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး- ကျွန်တော် ဆရာကြီး ဆုံးမတာတွေကို အလေးအနက် ထားပြီးတော့ ကြိုးစားပါတယ် ဆရာကြီး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မေးခွန်းလေး တစ်ခုမေးပါရစေ။
ဖြေ ။ ဘာမေးမှာလဲ —
မေး ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာလဲ ဆရာကြီး။
ဖြေ။ အော် နိဗ္ဗာန်က နေရာမရှိဘူးလေ။ ဋ္ဌာနမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် လူ့ပြည် နတ်ပြည် ဗြဟ္မာ့ပြည် သွားတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေ၀သညာ နာသညာ — ဟိုဘက်မှာ နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ ပြောရင်လည်း (၃၁) ဘုံရဲ့ လွတ်ရာပေါ့။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဒီဘက်က ဋ္ဌာနအဆုံးမှာ ရှိတာပဲလေ။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားနေပါတယ် ဆရာကြီး။
ဖြေ ။ ကောင်းတာပေါ့ နိဗ္ဗာန်ကို စိတ်ဝင်စားတာ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ နိ ၀ါန။ နိဆိုတာ မရှိခြင်း၊ ၀ါနဆိုတာ အစေး။ တဏှာအစေး မရှိခြင်းပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်က တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိကို အစေးမကပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လည်း နိဗ္ဗာန်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း နီးရမှာပေါ့။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး ကျွန်တော် နီးလည်း နီးချင်ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန် အထဲအထိ ၀င်ချင်ပါတယ် – သိချင်လို့ပါ။
ဖြေ။ ကောင်းတာပေါ့ နိဗ္ဗာန် အထဲထိဝင်ပြီး သိချင်တော့ သိချင်တာတွေ သိရမှာပေါ့။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အေးချမ်းတဲ့ သဘောပဲ။
မေး ။ ဆရာကြီး ကျွန်တော် တစ်ချိန်က အဘိဓမ္မာသမား တစ်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်ဖူးတယ်။
ဖြေ ။ ဟာ ဘာဖြစ်လို့တုန်း။
မေး ။ သူတို့က နိဗ္ဗာန်ကို စိတ်နဲ့ သွားမယ်လို့ ပြောတော့ – ကျွန်တော်က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တော့ ရန်ဖြစ်ကြတာပေါ့ ဆရာကြီးရယ်။
ဖြေ။ တက္ကသိုလ်မှာ ယုတ္တိဗေဒပညာ ဆိုတာရှိတယ်၊ အဲဒီ ယုတ္တိဗေဒပညာလေးလည်း ဆည်းပူးဦးလို့ အကြံဉာဏ် ပေးလိုက်ပေါ့။
မေး ။ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး ဒါပေမယ့် ယုတ္တိဗေဒဆိုတာ ကျွန်တော်က မတတ်ဘူး ဆရာကြီးရယ်။
ဖြေ ။ ယုတ္တိဗေဒဆိုတာက မပျက်တဲ့ ဓာတ်ထဲကို ပျက်နေတဲ့ဓာတ်က ၀င်လို့မရဘူးပေါ့၊ မရကောင်းဘူး၊ မရစကောင်းဘူး။ (It cannot be both true at the same time.) ပျက်နေတာကလည်းရှိတယ်၊ မပျက်တာကလည်းရှိတယ် အတူတူတွဲမယ်ဆို မရဘူး။ (Logic) မှာ (Disjunction) ခေါ်တယ်။ ဒီတော့ ဒါလေး ဘာလေးလည်း အကြံဉာဏ် ပေးလိုက်ပေါ့။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ ဆရာကြီးကတော့ (Logic) တတ်တာကိုး ကျွန်တော်ကတော့ မတတ်ဘူး။ သို့သော်လည်း ဒါက သဘာဝကျပါတယ် ဆရာကြီးရယ် – ဆန့်ကျင့်ဘက် လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာမှာ လောကုတ္တရာထဲ လောကီက ၀င်မယ်ဆိုတော့ ဘယ်လက်ခံမလဲ။ ကျွန်တော် ကြားဖူးတယ်ဆရာကြီး – ခွေးသေကောင်ပုပ်တွေ ဘာတွေကို ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာက လက်မခံဘူးဆိုတာ။
ဖြေ ။ အဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး။ ကျွန်တော် ပိုဘ၀င်ကျသွားပါပြီ။ ဒီတစ်ခါ တွေ့ရင် ဒီထက်ဒီ ပိုင်ပိုင်နိုင် ဆွေးနွေးလိုက်ပါဦးမယ်။
ဖြေ ။ ဆွေးနွေးပါ။ တွေ့တဲ့အခါ ဆွေးနွေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်က ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဖြစ်ပျက်ဆုံးဖို့ အရေးကြီးတယ်နော် ဒါကိုလည်း မမေ့နဲ့။
မေး ။ ကောင်းပါပြီ ဆရာကြီး – ဖြစ်ပျက်ဆုံးအောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားပါ့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာကြီး။
မေး ။ ကြှနျတျောတော့ Camp ဝငျနပွေီ ဆရာကွီး။
မေး။ သစ်စာသိဖို့ အတှကျပေါ့ ဆရာကွီးရယျ။
မေး ။ ကြှနျတျော လောကကွီးကို ခဏ ခေါကျထားကွညျ့တယျ ဆရာကွီး။
ဖွေ ။ လောကဆိုတာတော့ ခေါကျရမှာပဲ။
မေး ။ကြှနျတျောအခု ရငျထဲမှာ လှတျတှတျ လှတျတှတျနဲ့ တျောတျောလေးတော့ နလေို့ကောငျးတယျ။
ဖွေ။ နလေို့ကောငျးပမေယျ့ သူ့ကိုလညျး လကျခံလို့ မဖွဈဘူး၊ အပကျြရှုတဲ့လိုငျး သှားရမှာပဲ။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါဆရာကွီး ကြှနျတျော နာခံပါ့မယျ၊ ရှုပါ့မယျ ဆရာကွီး။
ဖွေ ။ မရှုခငျကထကျ စာရငျတော့ အခုဟာ ကောငျးနတေယျလို့ ပွောလို့ရပမေယျ့ ဒါ လမျးဆုံးတာမှ မဟုတျတာ။ ဒီတော့ ရှုရမှာပဲ။
မေး ။ ကောငျးပါပွီ ဆရာကွီး၊ နာခံပါ့မယျ။ ကြှနျတျော နညျးနညျး ကွညျလငျ ပေါ့ပါးမှုလေးတှေ ဘာလေးတှေ ရှငျးသနျ့မှုလေးတှလေညျး ခံစားရပါတယျ။
ဖွေ။ ဒါ တရားတျောရဲ့ ဂုဏျကြေးဇူးပဲလေ။ ဒီထကျဒီ တှေ့ဦးမှာလေ။ ဒါက လမျးခုလတျပေါ့။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး- ကြှနျတျော ဆရာကွီး ဆုံးမတာတှကေို အလေးအနကျ ထားပွီးတော့ ကွိုးစားပါတယျ ဆရာကွီး။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော မေးခှနျးလေး တဈခုမေးပါရစေ။
ဖွေ ။ ဘာမေးမှာလဲ —
မေး ။ နိဗ်ဗာနျဆိုတာ ဘယျနရောမှာလဲ ဆရာကွီး။
ဖွေ။ အျော နိဗ်ဗာနျက နရောမရှိဘူးလေ။ ဋ်ဌာနမရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ လူ့ပွညျ နတျပွညျ ဗွဟ်မာ့ပွညျ သှားတော့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ နဝေသညာ နာသညာ — ဟိုဘကျမှာ နိဗ်ဗာနျပဲလို့ ပွောရငျလညျး (၃၁) ဘုံရဲ့ လှတျရာပေါ့။ နိဗ်ဗာနျဆိုတာ ဒီဘကျက ဋ်ဌာနအဆုံးမှာ ရှိတာပဲလေ။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ ကြှနျတျော နိဗ်ဗာနျကိုလညျး စိတျဝငျစားနပေါတယျ ဆရာကွီး။
ဖွေ ။ ကောငျးတာပေါ့ နိဗ်ဗာနျကို စိတျဝငျစားတာ။ နိဗ်ဗာနျဆိုတာ နိ ၀ါန။ နိဆိုတာ မရှိခွငျး၊ ၀ါနဆိုတာ အစေး။ တဏှာအစေး မရှိခွငျးပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယျက တဏှာ မာန ဒိဋ်ဌိကို အစေးမကပျဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ ယောဂီ ပုဂ်ဂိုလျဆိုတော့လညျး နိဗ်ဗာနျနဲ့ တဖွညျးဖွညျး နီးရမှာပေါ့။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါဆရာကွီး ကြှနျတျော နီးလညျး နီးခငျြပါတယျ။ နိဗ်ဗာနျ အထဲအထိ ဝငျခငျြပါတယျ – သိခငျြလို့ပါ။
ဖွေ။ ကောငျးတာပေါ့ နိဗ်ဗာနျ အထဲထိဝငျပွီး သိခငျြတော့ သိခငျြတာတှေ သိရမှာပေါ့။ နိဗ်ဗာနျဆိုတာ အေးခမျြးတဲ့ သဘောပဲ။
မေး ။ ဆရာကွီး ကြှနျတျော တဈခြိနျက အဘိဓမ်မာသမား တဈယောကျနဲ့ ရနျဖွဈဖူးတယျ။
ဖွေ ။ ဟာ ဘာဖွဈလို့တုနျး။
မေး ။ သူတို့က နိဗ်ဗာနျကို စိတျနဲ့ သှားမယျလို့ ပွောတော့ – ကြှနျတျောက မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ပွောလိုကျတော့ ရနျဖွဈကွတာပေါ့ ဆရာကွီးရယျ။
ဖွေ။ တက်ကသိုလျမှာ ယုတ်တိဗဒေပညာ ဆိုတာရှိတယျ၊ အဲဒီ ယုတ်တိဗဒေပညာလေးလညျး ဆညျးပူးဦးလို့ အကွံဉာဏျ ပေးလိုကျပေါ့။
မေး ။ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး ဒါပမေယျ့ ယုတ်တိဗဒေဆိုတာ ကြှနျတျောက မတတျဘူး ဆရာကွီးရယျ။
ဖွေ ။ ယုတ်တိဗဒေဆိုတာက မပကျြတဲ့ ဓာတျထဲကို ပကျြနတေဲ့ဓာတျက ဝငျလို့မရဘူးပေါ့၊ မရကောငျးဘူး၊ မရစကောငျးဘူး။ (It cannot be both true at the same time.) ပကျြနတောကလညျးရှိတယျ၊ မပကျြတာကလညျးရှိတယျ အတူတူတှဲမယျဆို မရဘူး။ (Logic) မှာ (Disjunction) ချေါတယျ။ ဒီတော့ ဒါလေး ဘာလေးလညျး အကွံဉာဏျ ပေးလိုကျပေါ့။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ၊ ဆရာကွီးကတော့ (Logic) တတျတာကိုး ကြှနျတျောကတော့ မတတျဘူး။ သို့သျောလညျး ဒါက သဘာဝကပြါတယျ ဆရာကွီးရယျ – ဆနျ့ကငျြ့ဘကျ လောကီနဲ့ လောကုတ်တရာမှာ လောကုတ်တရာထဲ လောကီက ဝငျမယျဆိုတော့ ဘယျလကျခံမလဲ။ ကြှနျတျော ကွားဖူးတယျဆရာကွီး – ခှေးသကေောငျပုပျတှေ ဘာတှကေို ပငျလယျ သမုဒ်ဒရာက လကျမခံဘူးဆိုတာ။
ဖွေ ။ အဲဒီအတိုငျးပဲပေါ့။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး။ ကြှနျတျော ပိုဘဝငျကသြှားပါပွီ။ ဒီတဈခါ တှရေ့ငျ ဒီထကျဒီ ပိုငျပိုငျနိုငျ ဆှေးနှေးလိုကျပါဦးမယျ။
ဖွေ ။ ဆှေးနှေးပါ။ တှတေဲ့အခါ ဆှေးနှေးပေါ့။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့အလုပျက ကိုယျ့ဖာသာကိုယျ ဖွဈပကျြဆုံးဖို့ အရေးကွီးတယျနျော ဒါကိုလညျး မမနေဲ့။
မေး ။ ကောငျးပါပွီ ဆရာကွီး – ဖွဈပကျြဆုံးအောငျ ကြှနျတျော ကွိုးစားပါ့မယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဆရာကွီး။